KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Wasiirka arimaha gudaha oo qaaday talaabo ay u baahnaayeen shacabka Soomaaliyeed
Tuesday 11 December 2012 09:11
Wasiirka arimaha gudaha oo qaaday talaabo ay u baahnaayeen shacabka Soomaaliyeed
Muqdisho (KON) Wasiirka wasaarada Arimaha gudaha xukuumada Soomaaliya ayaa jawaab fiican ka bixisay dhibaato nin shacab ah u geesteen ciidamada nabad sugida Soomaaliya.
C/kariin Xuseen Guuleed oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu sheegaya asaga oo jooga gurigiisa in muwaadin Soomaaliyeed uu u soo diray fariin cabasho ah taasi oo ah in ay dhibaateeyeen ciidamada Nabad sugida.
Wasiirka ayaa sheegay intaasi ka dib in uu amray taliska Nabad sugida in ay falkaasi soo cadeeyaan, wuxuuna sheegay in lagu guuleestay in muwaadinkii la dhibaateeyay uu ciidamada ka soo saaray askartii dhibaatada u geestay.
“sadax askari oo ahaa kuwii dhibaatada gaarsiiyay muwaadinkaasi fariinta ii soo diray ayaa la qabtay waxaana haatan ay ku jiraan xabsiga waxaya xugayaan maxkamad”sidaa waxaa yiri wasiirka.
Ugu danbayntii wasiirka ayaa sheegay in qof waliba oo muwaadin Soomaaliyeed ah ay xaq u leedahay in ay nabad ku noolaato wuxuuna sheegay in aanan laga ogolaanaynin in ay askartu dhibaateeyaan shacabka.